Fihavanana… tsy mampihavana | NewsMada
Fihavanana… tsy mampihavana
Par Taratra sur 27/11/2021
Mampiavaka ny Malagasy maneran-tany ny fihava­nana? Ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM) aza, miady ny hanaovana izany ho vakoka iraisam-pirenena. Hanao ahoana? Mandra-pitrangan’izay hitranga, mila mandini-tena ihany isika Malagasy: hatraiza marina, ohatra, no tena iainana ny hoe fihavanana amin’izao vanim-potoana izao? Na amin’izay tena maha izy azy izay fihavanana izay…
Misimisy ihany, ohatra, ny fomba fiteny sy fijery momba ny fihavanana tato ho ato izay, tsy tongatonga ho azy fa misy antony sy akony. Eo, ohatra, ny hoe: ny vazaha mody miady, fa ny Malagasy mody mihavana. Talohaloha tany, nisy ny fifampiampangan’ny sasany fa tsy fiaraha-maka sary amin’ny fifandraisan-tanana sy fifamihinana etsy sy eroa ho hitan’ny rehetra ny hoe fihavanana nefa ny atao ihany no atao.
Misy lafiratsiny ary mety manimba zavatra betsaka ny fihavanana rehefa tsy hay ny mampiasa azy? Na mibirioka any amin’ny tsy izy be ihany… Izay no ahina hahazo vaha­na na efa maka laka amin’izao? Mampanahy, manahi­rana… Saika ny fihavanana tsinona no ialokalofan’ny sa­sany amin’ny ratsy ataony: ho fitandroana ny fihavanana, ohatra, misy ny miaritra fotsiny ny tsy marina sy tsy rariny amin’ny ady tany.
Tsy vita ny mamaky bantsilana ny tsy mety mitranga na ny ratsy ataon’ny sasany noho ny fihavanana. Izay no anisan’ny fototra sy fositra mahasarotra ny fampandro­soana? Mbola misy koa, ohatra, ny tantaran-drazana tsy sahy vakina bantsilana; eny, na eo amin’ny tantaram-pirenena aza: odian-tsy fantatra sao mamoha fota-mandry. Azo heverina ho marin-toerana sy latsaka anaty ve ny fihavanana amin’izany?
Mbola misy ny azo lazaina sy heverina ny amin’ny fihavanana? Na “indro kely” na “indro be” etsy sy eroa… Sao ireny no tsy tena mampihavana amin’izao? Indra­indray, fandamindaminan-dratsy ny toe-draharaha tsy takona afenina sao manala baraka na manahirana ny fihavanana. Tsy mampihavana izay? Aleo hifanatrehana…